शंकराचार्यले हिन्दु जगाउलान् ?
काठमाडौं । वैशाख ३० गते जहाजबाट काठमाडौं उत्रेका गोवद्र्धन मठ पुरीका पीठाधीश्वर श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य पुज्यपाद स्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज जेठ ८ गतेसम्म काठमाडौं, चितवन, हेटौडा, वीरगञ्ज हुँदै रक्सौलबाट फर्कने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । शंकराचार्यको आजै टुडिखेलमा नागरिक अभिनन्दन गरिने छ भने यस्तो नागरिक अभिनन्दन चितवन र वीरगञ्जमा पनि आयोजना हुनेछ ।
पूर्वराजा दुई हप्ते बसाइका लागि बारा पुगेका हुनाले शंकराचार्य र पूर्वराजाको उतै भेटवार्ता हुने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
शंकराचार्य स्वागतार्थ मूल समारोह समितिमा स्वामी पद्मधराचार्य: संयोजक, सहसंयोजकहरुमा हरिबोल भट्टराई, नीलप्रसाद भण्डारी, डा.रामचन्द्र अधिकारी, किशोरी महतो, अर्जुनप्रसाद बास्तोला, सल्लाहकारमा पुष्प पराजुली, सचिवालयतर्फ भरत पौडेल, चक्रदेव जोशी रहेका छन् । विश्वहिन्दु महासंघ अन्तर्राष्ट्रियका अध्यक्ष भरतकेशर सिंहका अनुसार शंकराचार्यको नेपाल आगमन धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण छ । शंकराचार्यज्यूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पर्यटन मन्त्रालय र पशुपति विकास कोषले पनि निमन्त्रणा पठाएका हुन् । उहाँको भ्रमण सफल पार्न आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य संघ संस्था, सरकारले पनि पूरा गर्नुपर्छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नेपाल भ्रमण सकेर फर्कने र शंकराचार्यको नेपाल भ्रमण सुरु भएको छ । के यो भ्रमणले सुतेका हिन्दुहरु जुरुक्कै उठ्लान कि कर्मकाण्डी पारामा मात्रै यो भ्रमण सिमित होला ?
शंकराचार्यले धर्म–जीवन–दर्शनबारे प्रवचन पनि दिने कार्यक्रम पनि छ । यस्तो प्रवचन चितवन र वीरगञ्जमा पनि दिनुहुनेछ । शंकराचार्यले त्रिवि सभाकक्षमा भोलि दिनुहुने प्रवचन र प्रश्नोत्तर विशेष महत्वको मानिएको छ । शंकराचार्यको त्रिवि हलमा प्रवचन पहिलो र अर्थपूर्ण रहेको छ ।
उहाँ १९९२ देखि शंकराचार्य गुरु परम्पराका १४५ औं शंकराचार्य हुनुहुन्छ । ज्ञान र विज्ञान दुवै विषयका ज्ञाता शंकराचार्यको नेपाल आगमन इसाइ र मुसाइकरण बढेको र पश्चिमाको हस्तक्षेप ज्यादै उछालमा रहेका बेला हुनलागेकाले पनि महत्वपूर्ण छ । तर, इसाईले सरकारलाई नै धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने धमास दिनसक्ने भइसक्दा पनि नेपालका हिन्दु अगुवाहरु कोठमा सिमित रहेका छन् । यसमाथि एक बालगुरुले विराटनगरमा आफूमाथि गोली हान्न लगाएको घटनाले हिन्दुहरुको आस्थामा कालो दाग लाग्न पुगेको छ । जुन हिन्दुविरोधीको मुद्दा बन्नपुग्यो ।
स्वामी पद्मधराचार्य, पीठाधीश्वर, बैंकटेश्वर मन्दिर देवस्थान, किशोरी महतोहरुका अनुसार शंकराचार्यको आगमन र प्रवचनले हिन्दु धर्ममा ठूलै बल पुग्ने विचार प्रकट गरेका छन् ।
प्रश्न के छ भने हिन्दु हुँ भन्नेहरुलाई मात्र पदलालसा बढेकाले एक हुन र एकता कायम गर्न नसफल छन् ।